(Sawirro):-Madaxweyne Farmaajo Wado Noocee ah ayuu Ku Safray Wado Nabadgalyo iyo Amaan Mise Ma Qatarteeda Leh.. | Allpuntland24.com
(Sawirro):-Madaxweyne Farmaajo Wado Noocee ah ayuu Ku Safray Wado Nabadgalyo iyo Amaan Mise Ma Qatarteeda Leh..
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayay u bilaabatay todobaadkan booqasho heerkeedu sareeyo oo uu ku tagayo gobalada Puntland, wuxuuna ka soo bilaabay magaalada Garoowe, isagoo ku dambeyn doono magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobalka Mudug oo uu habeen joogi doono.
Madaxweynaha Soomaaliya wuxuu ku safray dhulkii ugu dheeraa ee gudaha dalka uu ku lugeeyo, wuxuuna baabuur ka raacay Garoowe isagoo ku tagay Cirifka Waqooyi ee Soomaaliya, waa magaalada Boosaase oo ay ka sokeeyaan buuraha dhaadheer ee GOLIS.
Madaxweynaha waxaa wehliyey wariyayaashii ugu badnaa ee la safra Madaxda Soomaaliya, waxayna taasi muujinaysaa muhiimada SOCDAALKA NABADDA ee Madaxweynuhu ku safray wadadii ugu dheereyd oo meel kasta ay Shacab joogeen.
Ma jirto wax dhib ah oo ay soo tabiyeen warbaahinta oo ay ku jiraan kuwa ugu caalamisan ee ka howlgala gudaha dalka, mana jiraan gabi ahaanba wax khaladaad ah oo ka dhacay Hanaanka Amni iyo Anshaxa ee wafdiga Madaxweynaha.
BBC-da oo ah warbaahin ay leedahay dawladda UK ayaa baahisay war xaaladiisu u muuqato mid loogu gargaarayo kooxaha Argagixiso, si gaar ahna waxaa diirada lagu saaray ammaanka oo halis badan lagu sifeeyey.
Qormada BBC-da oo uu qoray Wariye Soomaali ah, sidda ka muuqata warbixinta Boggeeda rasmiga ah lagu daabacay, waxaa dibu habeyn lagu sameeyey markii ay dadku Baraha bulshada aad uga hadleen dhacdadan, ayna ku sifeeyeen mid aan gabi ahaaba sax aheyn.
Mootooyin ayaa lagu galbiyey Madaxweynaha Soomaaliya ilaa Boosaaso iyo Garoowe oo isku jira 480KM, waana masaafo dheer oo ay tahay arrin muujisay hanaanka nabdeed iyo guusha laga gaaray la dagaalanka Argagixisada.
In Madaxweyne Soomaaliyeed iyadoo shacabkiisu ku faraxsan yihiin uu masaafo dhulka ah oo Mootooyin galbinayaan waa arrin ku cusub Soomaaliya, waana mid ay ku qalbi-qaboobayaan wadaniyiinta mudada dheer ku jiray dhibka iyo dagaalada dibu dhaca u keenay dalkooda.
Laakiin muuqaalada laga duubay socdaalka Madaxweynaha ayaa ahaa kuwa muujinaya Mudane Farmaajo oo tamashleynaya gudaha Magaalooyinka, dadweynaha u dhexgalay si aan horey loo arkin taas oo muujisay hanaanka Ammaanka oo sare loo qaaday.
Soomaaliya wey kasoo kabanaysaa dagaalo ay ku jirtay mudo dheer, sidaas oo kalena waxay ka soo kacday hurdo dheer oo ay galiyeen gacmo Shisheeye oo taageero siinaya qaar kamid ah Siyaasiinta gudaha, Puntland-na waxay gaartay guul ka dhan ah kooxaha Argagixiso, waxayna noqotay meesha kaliya ee kamid ah Soomaaliya oo ay ka socdaan mashaariicda ugu badan ee dalka laga hirgaliyey tan iyo markii ay meesha ka baxday dawladdii dhexe ee Soomaaliya.
Gobaladaas oo waqti ahaa kuwa aan laheyn Kaabayaal dhaqaale iyo garoomo diyaaradeed oo ay uga tagtay dawladdii dhexe ee dalka soo martay, hadda waxay yihiin kuwa ugu horeeya dhanka garoomada iyo jidadka laamiga ah, taas oo ku timid kalsooni iyo Isku tashiga guud ee dhinacyada.